" ထာဝရနှောငျကွိုး ဇာတျကားမှာ သုသုရဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကေ လကျဖြားခါလောကျတယျလို့ ခြီးမှမျးလိုကျတဲ့ သကျမှနျမွငျ့ " - Cele Gabar
” ထာဝရနှောငျကွိုး ဇာတျကားမှာ သုသုရဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကေ လကျဖြားခါလောကျတယျလို့ ခြီးမှမျးလိုကျတဲ့ သကျမှနျမွငျ့ “
လကျရှိမှာ ပရိသတျပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးအစားဆုံး ရုပျရှငျဇာတျကားကတော့ ” ထာဝရ နှောငျကွိုး ” ရုပျရှငျဇာတျကားလို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပွီး ရုံမတငျခငျထဲက လကျမှတျတှရေောငျးကုနျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။Press Show သှားရောကျကွညျ့ရှူခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျသကျမှနျမွငျ့လညျးအပါအဝငျပဲ ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အမွငျလေးကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Press Show သှားရောကျကွညျ့ရှူခဲ့တဲ့သူတျောတျောမြားမြားရဲ့ ခြီးမှမျးခကျြတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှအေရမျးစိတျဝငျစားနကွေတဲ့အခြိနျမှာ ” Big Congratulations ပါ Central Base Production, Now n Ever Team ဘယျလိုကောငျးကွောငျးတှေ မပွောတော့ဘူးနျော.. Spoil ဖွဈသှားမှာစိုးလို့ အခနျးတိုငျး သဘောကနြတောဆိုတော့လေ သုသုရယျ လကျဖြားခါပါတယျ။ ဆရာမကွီးပါ ယူ …ကိုဇာဏျရဲ့ ရုပျခတြာကွီးက ကြှတျဆငျကွီး.. Motivation တှေ ရလို့ ဟီး..ဇာတျလမျး ဇာတျညှနျး တေးရေး ကိုဇာဏျလေးစားတယျရှငျ့။ ” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ အမှတျတရပုံရိပျတှနေဲ့ အတူ ဝမြှေခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သကျမှနျမွငျ့ကတော့ ခငျြးမလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေ သဘာဝမငျးသမီးလေးလို့တောငျတငျစားချေါဝျေါခံရတဲ့မငျးသမီးလေးတဈလကျဖွဈတဲ့အပွငျ အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျ မညျသညျ့နာမညျဆိုးမှမရှိဘဲ ကရြာဇာတျရုပျကိုပီပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျမှုတှကွေောငျ့ အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆုနှဈဆုကိုပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့တာပါ။ အိမျထောငျကပြွီး သားဦးလေးကိုမှေးပွီးနောကျ သမီးလေးကိုထပျမံ မှေးဖှားခဲ့ပမေယျ့ သကျမှနျကတော့ ပှဲတကျတှမှော အရမျးကိုကကျြသရရှေိလှစှာနဲ့ ကလေးအမလေို့မထငျရလောကျအောငျ နုပြိုလှနျးနတေယျလို့ဆိုရမှာပါ။ CeleGabar ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြသကျရဲ့ အညှနျးလေးတှကေိုဖတျပွီး သှားကွညျ့ခငျြနပွေီလားဆိုတာ မှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။
” ထာဝရနှောင်ကြိုး ဇာတ်ကားမှာ သုသုရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက လက်ဖျားခါလောက်တယ်လို့ ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့် ”
လက်ရှိမှာ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ ” ထာဝရ နှောင်ကြိုး ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ရုံမတင်ခင်ထဲက လက်မှတ်တွေရောင်းကုန်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။Press Show သွားရောက်ကြည့်ရှူခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်သက်မွန်မြင့်လည်းအပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်လေးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Press Show သွားရောက်ကြည့်ရှူခဲ့တဲ့သူတော်တော်များများရဲ့ ချီးမွမ်းချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ” Big Congratulations ပါ Central Base Production, Now n Ever Team ဘယ်လိုကောင်းကြောင်းတွေ မပြောတော့ဘူးနော်.. Spoil ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ အခန်းတိုင်း သဘောကျနေတာဆိုတော့လေ သုသုရယ် လက်ဖျားခါပါတယ်။ ဆရာမကြီးပါ ယူ …ကိုဇာဏ်ရဲ့ ရုပ်ချတာကြီးက ကျွတ်ဆင်ကြီး.. Motivation တွေ ရလို့ ဟီး..ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း တေးရေး ကိုဇာဏ်လေးစားတယ်ရှင့်။ ” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ ဝေမျှခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်ကတော့ ချင်းမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေက သဘာဝမင်းသမီးလေးလို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် မည်သည့်နာမည်ဆိုးမှမရှိဘဲ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုနှစ်ဆုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားဦးလေးကိုမွေးပြီးနောက် သမီးလေးကိုထပ်မံ မွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် သက်မွန်ကတော့ ပွဲတက်တွေမှာ အရမ်းကိုကျက်သရေရှိလှစွာနဲ့ ကလေးအမေလို့မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်သက်ရဲ့ အညွှန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီး သွားကြည့်ချင်နေပြီလားဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” သူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကို ဗီဒီယိုလေးမှတဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ ရှိန်းတင့်ထူး”
” နေတော်တော် မကောင်းတာကြောင့် ချီချီရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို ပြန်လိုချင်ကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အောင်နွေဦး “
“ရေဘေးအတွက် ပရဟိတတွေ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးနောက် ခရီးပန်းကာ အပြင်းဖျားနေတဲ့ အိချောပို “